राजनीतिक निकासको बाधक नेकपा ! - शुभयुग
२०७८ बैशाख ९, बिहिबार
subhayugsubhayug.comनेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकेपी शर्मा ओलीनेकपाप्रधानमन्त्रीCorona Virusनेकपा एमाले
नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा कोरोना सङ्क्रमित महिलाको मृत्यु
३ महिनापछि बिशाल बजारको सेयर कारोबार फुकुवा
बिहीबार पनि बढ्याे सुनकाे मूल्य : कति पुग्याे ताेलाकाे ?
हुम्लामा वैशाख महिनामा पनि हिमपात
कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा भारतले राख्यो विश्व रेकर्ड – एकै दिन तीन लाख १५ हजार भन्दा बढी
ला लिगा : रियल म्याड्रिडको क्याडिजमाथि सहज जित
रिलायन्स फाइनान्सको लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम मौका आज
ओली नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिने जसपाको निष्कर्ष
बल्खुमा एमाले पार्टी कार्यालयको भवन शिलान्यास
सात दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन ८६ राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन
बिहानैदेखि देशभर वर्षा
ज्योति विकास बैंकको वितरण योग्य मुनाफा ३५३.९१ प्रतिशतले बढ्यो : कति पुग्यो इपिएस ?
राजनीतिक निकासको बाधक नेकपा !
Reporterप्रकाशित मिति: २०७७ फागुन १५, शनिबार (१ महिना अघि)
२५२ पाठक संख्या
१५ फागुन, काठमाण्डौ – २०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई नजिक पुगेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नै अहिलेको राजनीतिक निकासको बाधक बनेको छ । नेकपा नेतृत्वको सरकार गठन भएको ३ वर्ष पुगेपनि अहिले निक्कै जटिल अवस्थामा राजनीति आइपुगेको हो । नेकपा आफै अहिले न सरकार जोगाउने स्थितिमा छ न त नयाँ सरकार बनाउने सक्षम अवस्थामा छ । निक्कै लामो समयदेखीको विवाद पुष ५ गते पार्टी अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि नेकपा पार्टी दुई समानान्तर गतिविधिमा चलिरहेको छ । कानुनी र संविधानको हिसाबले नेकपा एक भएपनि बाँकी सम्पूर्ण गतिविधि दुई पार्टीको जस्तो छ । प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल दुई खेमामा विभाजित छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएपछि दुवै पक्ष अहिले शक्ति प्रर्दशनको होडमा लागेका छन् ।
दाहाल–नेपाल समुह नयाँ सरकार बनाउने जोडमा लागेका छन् । ओली भने सकेसम्म आफु नेतृत्वकै सरकार जोगाउने नभए कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने दाउमा छन् । पुनःस्थापना भएको प्रतिनिधिसभामा नेकपाको मात्रै स्पष्ट बहुमत छ । तर यो पार्टी अहिले कानुनी रुपमा विभाजित नभएपनि दुई समुहमा बाँडिएको छ । जबसम्म कानुनी रुपमा यो पार्टी फुट्दैन वा एक मनले जुट हुदैन तबसम्म नेपालको राजनीति के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । नयाँ सरकार बनाउन वा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले पहिले आफ्नो पार्टी क्लियर गर्न दाहाल–नेपाललाई सुझाव दिइसकेका छन् । तर, कांग्रेस र जसपाले भनेजस्तो सजिलो नेकपा विभाजन गर्ने अवस्थामा छैन । कानुनी रुपमा निक्कै जटिल अवस्थाबाट नेकपा गुज्रिरहेको छ । न त पार्टी एक हुने अवस्थामा छ न त तत्काल फुट्ने अवस्थामा छ ।
दाहाल–नेपाल समुह जसरी पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने दाउमा देखिएका छन् । त्यसका लागि उनिहरु कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्विकार गर्न तयार देखिएका छन् । ओलीसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य गर्ने पक्षमा सो समुह देखिएको छैन । तर, दुवै समुहका दोस्रो तहका नेता भने फेरी एकताको पक्षमा उभिन थालेका छन् । विगतमा पनि यस्तै पक्षमा देखिएको ति युवा नेता विभाजनका क्रममा दुवै पक्षका शिर्ष नेताको फेरो समाएर गालीगलौजमा आफै उत्रिएका थिए । यता, ओली पक्ष भने जसरी पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा टिकाइरहने नभए देउवा नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने पक्षमा देखिएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिइ संसद्मा डटेर सामना गर्ने बताएका छन् ।
पार्टीनिकट अनेरास्ववियुको बृहत् कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयको सम्मान गर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले कसैले राजीनामा माग्दैमा नदिने र संसद्को सर्वोच्चतालाई मानेर संसदमा नै सामना गर्ने बताए । उनले नेकपाको अर्काे समूहलाई हिम्मत भए अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आउने चेतावनी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको सामना गर्नुहुन्छ । नेकपाले लोकतान्त्रिक विधिबाट आउने सबैको सामना गर्छ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री संसद्को सामना गरेर नेपाली जनताप्रति आफ्नो लोकतन्त्रको प्रतिबद्धतालाई प्रमाणित गर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सडकमा नारा लगाएको भरमा राजीनामा नगर्ने स्पष्ट उनले पारे ।
नेकपाको दुवै पक्षले अहिले नेपाली कांग्रेसको आस व्यक्त गरेका छन् । तर, कांग्रेस भने अहिलेसम्म मौन देखिएको छ । यद्यपी भारत र चीनका राजदूतले आगामी सरकार निर्माणमा निर्णायक देखिएका देउवासँग भेटवार्ता गरिसकेका छन् । जसले गर्दा भावी समिकरण कस्तो बन्ने भन्नेमा अन्यौल देखिएको छ । नेकपा कानुनी रुपमा विभाजन नभएसम्म नेपालको राजनीति कसरी अगाडी बढ्छ भनेर एकीन नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउछन् । नेपालको राजनीति अब अगाडी बढ्छ भन्नका लागि कि नेकपा एकता हुनुपर्ने नभए विभाजन हुनुपर्ने उनिहरु बताउछन् ।
सर्वोच्चको न्यायाधीशमा प्रस्तावित सुवेदी र चुडालमाथि संसदीय सुनुवाई सुरु
‘जापान–नेपाल सम्बन्ध थप उचाइमा पुर्याउन प्रयत्नशील रहनेछु’